Stenbolone အမှုန့် (5197-58-0) hplc≥98% Buy | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / Stenbolone အမှုန့် (5197-58-0)
SKU: 5197-58-0. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Stenbolone မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (5197-58-0) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Stenbolone အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Stenbolone အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 154-156 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဓာတုအမည်များ: 2-methyl-δ1-4,5α-dihydrotestosterone (2-methyl-δ1-DHT) သို့မဟုတ် 2-methyl-5α-androst-1-my-17β-ol-3-တစ်ဦးအဖြစ်
အခြားအမည်များ: Anatrofin နှင့် Stenobolone,
Stenbolone အမှုန့်နာမည်ကျော် steroids Anadrol, Oxitosona (oc), နှင့် Anapolon ထုတ်လုပ်သည်။ ဒါဟာ Stenbolone အမှုန့်သည်အခြားသုံးဒြပ်ပေါင်းများအလားတူ application တစ်ခုရှိပါတယ် သို့ဖြစ်. အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Syntex အဆိပ်အတူတူကုမ္ပဏီ Anadrol ဖို့ပျော့အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် Stenbolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ Stenbolone အမှုန့်အသည်း-အဆိပ်သင့်မဖြစ်သောကြောင့်ထိုအကုမ္ပဏီအောငျမွငျခဲ့မဟုတ်သလိုကြောင့် aromatize, ထိုသို့သာအနည်းငယ်အနေနဲ့-drogenic ဖြစ်ပါတယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သွေးနီဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုတိုးပွါးကတည်းကအပြင်, ကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အသှေးကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူသွေးအားနည်းရောဂါ၏ကိစ္စများတွင် Anadrol မှအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ dieting အခါသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး accelerates ကတည်းကဤအကြောင်းကြောင့် Stenbolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုအထူးသဖြင့်ဝတ်စုံကို-နိုင်ခဲ့ယှဉ်ပြိုင်အားကစားသမားများအဘို့ဖြစ်၏။ တစ်ချန်ပီယံရှေ့တော်၌ထိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ယှဉ်ပြိုင်မကြာခဏ catabolic အဆင့်နှင့်သင်တန်းများကျော်တစ်ခွအေနအေခံစားရသည်။ Stenbolone အမှုန့်လျှင်မြန်စွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒီ counters ကရေဆွဲမထားဘူးနှင့်အီစရိုဂျင်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ပါဘူးကတည်းကကောင်းတစ်ဦးပုံစံကိုရရှိရန်ကူညီပေးသည်။ အချို့မှားယှငျးစှာတစ်ခုထိုးဆေး Anadrol ခေါ်သော်လည်းအစွမ်းသတ္တိ, အစုလိုက်အပြုံလိုက်၏ buildup များအတွက်, သို့သော်, Stenbolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်, ဝေးနေဖြင့် Anadrol ကဲ့သို့သင့်လျော်ဘူး။ Stenbolone အမှုန့်ဟာပါးစပ်ဗားရှင်းထက်နိမ့်ဟိုနှင့်အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုရှိပြီးတကအလယ်အလတ်အစွမ်းသတ္တိကိုအမြတ်နှင့်အတူတစ်လျှောက်နှေးကွေးပေမယ့်အစိုင်အခဲကြွက်သားအမြတ်စေပါတယ်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးများနှင့် Steroid တစ်မျိုးအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုပုံနှင့်သိသာထင်ရှားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲစိတ်ကျေနပ်စရာရလာဒ်များရရှိရန်အဘယ်သူသည်အဟောင်းများကိုအားကစားသမားများအားဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဒီနေသော်လည်း Stenbolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်, သူအပေါင်းတို့ထက်, ငါသညျသူ၏စာအုပ်မြေအောက် steroids လက်စွဲစာအုပ်2အတွက်အမေရိကန် "steroids Guru" ဒံယလေ Duchaine ကအတည်ပြုသောယှဉ်ပြိုင်မှု Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်: "ဒီ dieting စဉ်အသုံးပြုရန်အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် ... "
Stenbolone အမှုန့် acetate form မှာဖွစျပါတယျကတည်းကမကြာခဏပုံမှန်ထိုး ob-တိမ်ဖို့လုံလောက်မြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်, အသွေးအဆင့်ကိုတန်ဖိုးများနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သာအနိမ့်ဝက်ဘဝကိုအချိန်ရှိပါတယ်။ တိုင်း2ရက်ပေါင်းအကောင်းဆုံးရလဒ်များကို for Stenbolone အမှုန့်ပုံမှန်အားဖြင့်နေ့စဉ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်အနည်းဆုံးထိုးသွင်း။ အားကစားသမားများအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းအပတ်စဉ်ထိုး 200-300 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက် 50 မီလီဂရမ်အစှမျးသတ်တိကိုမကြာခဏနှစ်သက်နှင့်အားကစားသမားနေ့စဉ်တစ်ခုလုံးကိုတ milliliter ampule ထိုးဒါမှမဟုတ်၏ထက်ဝက်မှအသုံးပြုမှုကန့်သတ်ဖြစ်စေသည်။ အမျိုးသမီးများပုံမှန်မီလီဂရမ် / ရက်သတ္တပတ် 100- 150 နှင့်အတူကောင်းသောအမှုကိုပြုသုံးယောက်တန်းတူအစိတ်အပိုင်းများသို့သူတို့ရဲ့အပတ်စဉ်သောက်သုံးသောဝေယူသင့်ပါတယ်။ ဝင်းကောင်းစွာအသည်းနှင့်ဖော, gynecomastia နှင့်သွေးတိုးဖြစ်ပေါ်ပါဘူးအားဖြင့်သည်းခံနေပါသည်ကတည်းကအလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချဖြစ်သကဲ့သို့ဝက်ခြံများနှင့်အမျိုးသားများတွင်တိုးမြှင့်ကျူးကျော်မှု, အနိမ့်နှင့်ရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာကျော်မြင့်သောဆေးညွှန်းပေးထားကြသောအခါသို့မဟုတ်စားသုံးမှုကြားကာလကြာတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက် Virilization လက္ခဏာတွေလည်းမရှိသလောက်အလွန်အထိခိုက်မခံပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ မူရင်းဝင်းမဟုတ်သလိုတစ်ခုအတုမမှောင်ခိုဈေးကွက်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအတု, Stenbolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ပေါ်ရှိပါတယ်။
လူတို့သညျအဘို့အ Stenbolone မှုန့်နမူနာသံသရာ။
အပတ်က Anatrofin testosterone
1 500mgs / ရက်သတ္တပတ် 250mgs / ရက်သတ္တပတ် 20mgs / ed 7caps / ed
2 500mgs / ရက်သတ္တပတ် 250mgs / ရက်သတ္တပတ် 20mgs / ed 7caps / ed
3 500mgs / ရက်သတ္တပတ် 250mgs / ရက်သတ္တပတ် 20mgs / ed 7caps / ed
4 500mgs / ရက်သတ္တပတ် 250mgs / ရက်သတ္တပတ် 20mgs / ed 7caps / ed
5 500mgs / ရက်သတ္တပတ် 250mgs / ရက်သတ္တပတ် 20mgs / ed 7caps / ed
6 500mgs / ရက်သတ္တပတ် 250mgs / ရက်သတ္တပတ် 20mgs / ed 7caps / ed
7 500mgs / ရက်သတ္တပတ် 250mgs / ရက်သတ္တပတ် 20mgs / ed 7caps / ed
8 500mgs / ရက်သတ္တပတ် 250mgs / ရက်သတ္တပတ် 20mgs / ed 7caps / ed
9 500mgs / ရက်သတ္တပတ် 250mgs / ရက်သတ္တပတ် 20mgs / ed 7caps / ed
10 500mgs / ရက်သတ္တပတ် 250mgs / ရက်သတ္တပတ် 20mgs / ed 7caps / ed
ဘယ်လို Stenbolone အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
Stenbolone အမှုန့် dromostanolone နှင့် oxymetholone နှစ်ဦးစလုံးအလွန်ဆင်တူသည်။ ဒါဟာအနေအထား 1 မှာကာဗွန်2နှင့်2နှင့်မီသိုင်းအုပ်စုတစ်စုအကြားတစ်ဦးကို double နှောင်ကြိုးနှင့်အတူ DHT တစ်ဆင်းသက်လာသည်။ အနေအထား2မှာမီသိုင်းအုပ်စုအီစထိုဂျင်ရန်နှင့်အချို့သောဒီဂရီမှနှစ်ဦးစလုံးမွှေးကြိုင်ထံမှ 3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase ခြင်းဖြင့်ကြွက်သားတစ်သျှူးအတွင်း inactivation ယင်းမော်လီကျူးကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဤသည် 2-methyl အုပ်စုသည်ကျဆင်းခြင်းအတန်ငယ်သည့်အန်ဒရိုဂျင် receptor မှ binding ပါဘူး။ ဤသည်ကိုဤ Steroid တစ်မျိုးမွှေးကြိုင်မှတစ်ဆင့်အီစထိုဂျင် metabolites ကူးပြောင်းမရနိုင် primobolan ပေမယ်တူသော primobolan ထက်အန်ဒရိုဂျင် receptor များအတွက်အနည်းငယ်လျော့နည်းစည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်တဲ့မော်လီကျူးအဘို့ကိုမှန်ကန်စေသည်။ Stenbolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့် oxymetholone တစ် gentler ဗားရှင်းဖြစ်အချို့တို့ကစဉ်းစားသည်။ ဤသည် Steroid တစ်မျိုး oxymetholone မှအလားတူဖွဲ့စည်းပုံရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ကို C-17 alpha alkylated မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အသည်း function ကိုအပေါ်အနည်းငယ်မျှသာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ Stenbolone အမှုန့် oxymetholone တူသောသွေးနီဆဲလ်တွေတည်ဆောက်လည်းသွေးနီဆဲလ်တွေတိုးမြှင့်ပြသထားပြီးဖြစ်သော dromostanolone အချို့ဒီဂရီမှ metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်သည်။
အဆိုပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုအလိုအလျောက်ဒီဒြပ်ပေါင်းမှာအားလုံးအီစထိုဂျင်သို့ aromatize မနိမ့်ဖြစ်သွားကြသည်။ ထို့ကြောင့်, တိုးမြှင့်သွေးပေါင်ချိန်, အိပ်မပျော်, ရေ retention ကိုနှင့် gyno ကဲ့သို့သောအီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာအလုံအလောက်, anatrofin အချို့ဝက်ခြံ, အဆီပြန်အသားအရေနှင့်တိုးမြှင့်ကျူးကျော်ရှိခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှဦးဆောင်ပင်အီစရိုဂျင်၏မွှေးကြိုင်ခြင်းမရှိဘဲ, အနည်းငယ်အန်ဒရိုဂျင်စရိုက်များရှိပါဘူး။ ထို့ကြောင့်, အမျိုးသမီးများကဒီ Steroid တစ်မျိုးသတိထားရပါမည်။
Stenbolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ပြုလုပ်ဖွယ်ရှိ 11-beta ကို hydroxylase အပေါ်သလောက် inhibitory လှုပ်ရှားမှုရှိသည်ပါဘူးဒါကြောင့် anadrol သလောက်အရွယ်အစားကိုအမြတ်သို့မဟုတ်သလောက်ဖောင်းမှုမှမထင်ထားဘူး။ Stenbolone အမှုန့်သောကြောင့် acetate Ester ၏တိုတောင်းသောဝက်အသက်တာ၏နေ့စဉ်ထိုးသွင်းခံရဖို့တော်မှာ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ acetate Ester ထိုး site ကိုမှာနာကျင်မှုနဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းထုတ်လုပ်ရန်ပုံရသည်။ Stenbolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့် 1-testosterone ဟော်မုန်း, ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ unmethylated ဗားရှင်းပေမယ့်မြင့်မားတဲ့ဟိုလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်အလားတူအန်ဒရိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုရှိပါတယ်။ ဤသည်တို့ကြောင့် 3-alpha hydroxy metabolites ဖို့လျှော့ချပြောင်းလဲခြင်းဖွယ်ရှိသည်။ Stenbolone အမှုန့်လျော့နည်းဖောင်းနှင့်မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်နှင့်အတူ oxymetholone ၏အားသာချက်များအများအပြားပေးထားပါတယ်။
AASraw ထံမှ Stenbolone အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Stenbolone မှုန့် 8 အရေးကြီးအရာ